Monday December 11, 2017 - 10:50:05 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Pentagon-ka ayaa sheegtay inay sii wadeyso dagaalka ka dhanka ah Islaamiyiinta Soomaaliya labada sano ee soo socota.
Qorshaha howl galkan oo la saxiixay bishii October ayaa wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ay dooneysaa inay ka awood sareeyo Wasaaradda Arrimaha dibadda Mareykanka oo awood u leh inay joojiso weerarada lagu qaado meelaha ka baxsan Mareykanka.
Sidoo kale Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa dooneysa in hadii qorshahan la ansixiyo uu noqdo mid sii kordhiya weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab labo sano iyo dheeraad, waxaana taas ka dhigan tahay inay qaadaan weeraro joogto ah, iyagoo aanay cidna la tashan.
Wargeyska New York Times oo soo xiganayay Mas’uul ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in qorshahan howl galkan dagaal uu yahay mid lagu bartilmaameedsanayo Kooxaha Islaamiyiinta.
Waaxda Difaaca ayaa qorshahan u gudbiyay Golaha Amniga Qaranka, si ay u ansixiyaan hay’adaha kale, Wakiilo ka socda Xoghayaha Difaaca Jim Mattis iyo guddiga ayaa diiday inay ka warbixiyaan faah faahinta qorshahan, marka laga reebo in cadaadis milateri la saaro argagixisada, si loo yareeyo ama looga hortago dilalka dadka rayidka ah.
"Ma dooneyno in aan u gudbino siyaasadaheenna iyo goobaha aan bartilmaameedsanayno ee argagixisada ee nagu haya hanjabaadaha, laakiin guud ahaan waan sheegi doonaa siyaasadaheena iyo shuruucda ka dhanka ah argagixisada inay sii wadaan”ayuu yiri Marc Raimondi, oo ah Afhayeenka Golaha amniga Qaranka.
Waxaa uu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo daryeel aan caadi aheyn oo lagu yareynayo khasaraaha dadka rayidka ah, iyadoo wax laga qabanayo baahida milateri, si looga adkaado cadawga.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in labada sano ee soo socota markii ay weeraradaasi dhacaan dib u eegis ku aadan wixii ka saoo baxay, waxaana dib u eegistaas ka imaan doontaa Mareykanka kaliya oo aan cid banaanka ka timaada aanay sameyn doonin.